बाख्रीमा खसीको अ’ङ्ग सुपर ग्लूले जोडेर खसीको मासु भन्दै बेच्दै! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/बाख्रीमा खसीको अ’ङ्ग सुपर ग्लूले जोडेर खसीको मासु भन्दै बेच्दै!
काठमाण्डौं । चाडवाडको मुखमा ठगीका अनेक स्वरुप देख्न पाइन्छ । अझ खाद्यान्न र मासु पसलमा त यस्ता ठगी झन धेरै हुने गरेको पाइएको छ । कोरोनालाई कारण देखाउँदै सामानको भाउ पनि आकाशिएको छ । त्यसमाथि अखाद्य र मिसावटले उपभोक्ता झन ठगिएका छन् ।दशैंमा धेरै खपत हुने भनेको मासु पनि हो । तर बासी मासु बेच्ने, म’रे’का जनावरको मासु बेच्ने तथा स्त्री प्रजातिका जनावरको मासु बेचेर पनि उपभोक्ता ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
बजार अनुगमनको क्रममा परासी बजारमा खसीको मासु देखिने गरि सुपर ग्लुले टाँसेर बेच्दै गरेको फेला परेपछि उक्त रहस्य सार्वजनिक भएको थियो । परासीको साप्ताहिक बुधबारे हाटबजार अनुगमन गर्ने क्रममा समितिले मासुमा भैरहेको यस्तो पनि गलत कार्य भेटेको थियो जुन सबैलाई अचम्मलाग्दो बिषय थियो ।त्यस समयमा एक खसी मासु पसलमा पुगेर मासु हेर्न थालेपछि बाख्रीको मासुमा सुपरग्लुले केहि भाग खसीको अ’ङ्ग टाँसेर खसीको रेटमा बाख्रीको मासु बेचिरहेको पाइएको थियो ।बजार अनुगमन सक्रिय बनाइए उपभोक्ता ठग्ने यस्ता ब्यापारी हतोत्साहित हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
सु’ति’रहे’की छो’री’को को’ठा’बाट आ’ए’को त्यो आ’वा’ज…